Filtrer les éléments par date : mardi, 01 février 2022
mardi, 01 février 2022 21:23
Vao fanonganam-panjakana aty Afrika, dia jamba sy moana daholo ny mpanome vaovao tandrefana
Pilo kely : Vao fanonganam-panjakana aty Afrika, dia jamba sy moana daholo ny mpanome vaovao tandrefana
Lazaina fa manjavozavo avokoa ny toe-draharaha, efa midofotra tsy miverin-dalana ny mpaka fanjakana vao hoe :
Any zay Guinée e.
Bonne nuit e.
mardi, 01 février 2022 20:52
Guinée-Bissau : Raikitra ny fifampitifirana manodidina ny lapa
io tolak'andro talata 1 febroary io, dia fifampitifiana mahery vaika no nitranga teo amin'ny miaramila mpihoka haka fanjakana sy ny mpiambina ny lapam-panjakana ao Guinée-Bissau, fierenena eo anelanelan'i Sénégal ao avaratra andrefan'ny Afrika sy Guinée eo atsimo kely andrefana.
mardi, 01 février 2022 20:51
Mali : Noroahin'ny fitondrana miaramila ny Ambasadôro Frantsay
Nomen'ny miaramila, izay naka ny fitondrana any Mali fe-potoana 72ora, nanomboka omaly alatsinainy 31 janoary 2022, ny Ambasadôro frantsay Joël Meyer hiala any Mali, taorian'ny "teny maniratsira", araka ny fandraisan'ireo mpitondra any Mali ankehitriny, nataon'i lehiben'ny diplomasia, minisitry ny raharaham-bahiny frantsay Jean-Yves Le Drian ny 27 janoary lasa teo.
Nanome fetr'andro anesoran'i Danemark ireo miaramila ao anatin'ny hery eoropeanina "Takuba", izay ny frantsay no mitana ny fibaikoana, ihany koa ireto Miaramila naka fanjakana any Bamako Mali ireto.
Nilaza moa ny fitondrana Danemark fa fitondrana mpanongam-panjakana tsy manara-dalàna ireto Miaramila ireto. Ary miantehatra amin'ny mersenera rosianina Wagner.
Naka fepotoana 15 andro ihany koa Lafrantsa andinihany ny ho ataony amin'ireo miaramila frantsay mbola mihantsona any an-toerana ankehitriny.
mardi, 01 février 2022 19:52
Toamasina : Tonga ny vary Tsinjo 21 000taonina
Vary Tsinjo milanja 21 000taonina no tonga eto amin'ny seranan-tsambon'i Toamasina, izay haparitaka manerana ny Nosy. Misy 2 300taonina amin'ireo vary nafarana ireo no efa an-dalana hamatsy ny tsena ao an-drenivohitra sy any amin'ny faritra Avaratry ny Nosy.
Efa tonga aty Toamasina ihany koa ireo ny simenitra Lucky milanja 12 000 taonina izay azo jifaina amin'ny vidiny mora.
Tety amin'ny seranan-tsambon'i Toamasina ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA sy Ramatoa vadiny nijery ny fahatongavan'ireo entana ireo androany 1 febroary 2022.
Efa an-dalana ihany koa ireo sambo mitondra vary 20 000taonina sy simenitra 9 000taonina hafa, izay nafarana amin'ny alalan'ny SPM SA – State Procurement of Madagascar, izay vinavinaina ho tonga amin'ny tapaky ny volana febroary.
mardi, 01 février 2022 19:51
Tsena Mora : Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tao Toamasina
Tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny Tsena Mora taty Toamasina ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady sy ireo mpikambana sasantsasany ao amin'ny Governemanta, olom-boafidy ary tompon'andraikitra isan-tsokajiny aty an-toerana.
Navoitran'ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana, Edgard Razafindravahy, raha nandray fitenenana izy fa napetraka mba hifampitsinjovana ny Tsena Mora ka mila arovana.
"Ny fahavalon'ny Tsena Mora dia ny halatra", hoy ny Minisitra androany tao an-tsenan'i Tanambao V, raha nampitandrina izay mety hanana hevi-dratsy. Fongorina koa ny kolikoly, tontakely ary mpanararaotra.
Marihana fa hisokatra indroa isan-kerinandro ny Tsena Mora izay ahitana ny Vary Mora amin'ny vidiny 1000 Ariary ny kilao, ary menaka amin'ny vidiny 5000 Ariary ny litatra.
mardi, 01 février 2022 19:24
Boriborintany faha 2 : Mitohy ny fitetezana sy fanampiana ireo Traboina
Manohy ny fitetezana sy fanampiana ireo traboina ny Solombavambahoaka voafidy teto amin'ny Boriborintany faha 2, sady kestora eo anivon'ny Antenimieram-pirenena, Lanto Rakotomanga, tetsy amin'ny fokontany Miandrarivo, Mahazoarivo ary Mandroseza.
Fizarana akanjo sy lamba fitafy no natao tety an-toerana, niarahana tamin'ny ministeran'ny mponina, izay nisaoran'ny Depioté Lanto Rakotomanga manokana ny ezaka sy fanampiana ny mponina eto amin'ny Boriborintany faha 2 nandritra izay fotoan-tsarotra izay.
Nisaotra ihany koa izy, ireo mpitandro filaminana izay tsy nitsahatra nanampy ireo traboina maro teto Antananarivo. Ny firaisankina tokoa, hoy hatrany ity Solombavam-bahoaka ity, no hery ary ny fifankatiavana no ahafahantsika mifanampy.
mardi, 01 février 2022 19:03